Ronaldo oo Juve gool u dhaliyay kulankiisii 1,000 ee heer sare ee uu kubad dheelo - BBC News Somali
Ronaldo oo Juve gool u dhaliyay kulankiisii 1,000 ee heer sare ee uu kubad dheelo
Cristiano Ronaldo ayaa 21 gool dhaliyay 21 kulan oo uu xilli ciyaareedkan dheelay Horyaalka Talyaaniga ee Serie A
Ma doonaysaa inaad 1,000 kulan oo ciyaaro heer sare ah aad ku xusto qaab cajiib ah? Ka warranse inaan la simato rikoor hore loo dhigay ee in 11 kulan oo xiriir ah aad Horyaalka Talyaaniga ee Serie A gool dhalisid?
Taasi waa waxa uu sameeyay Cristiano Ronaldo - weerraryahanka kooxda Juventus oo hab la yaab leh ugu jawaabay warka sheegayay in Lionel Messi uu dhalilyay afar gool kulankii ay kooxdiisa Barcelona guusha ka soo hoysay isla maalintaas.
Ronaldo, oo 35-jir ah, ayaa ka faa'iidaystay kubbad uu soo laaday Juan Cuadrado kaddibna shabaqa cuksiiyay sidaana waxa uu kula sintay rikoor goolal xiriir ah oo ay hore u dhigeen Gabriel Batistuta iyo Fabio Quagliarella.
Aaron Ramsey ayaa goolka labaad u dhaliyay kooxda hogaaminaysa Horyaalka Serie A taas oo 2-1 uga badisay kooxda SPAL.
Ramsey ayaa goolkiisa dhaliyay saacad markii ay ciyaarta socotay, iyadoo uu kubadda ka dulqaaday goolhaye Etrit Berisha kaddib markii ay u timid kubad uu si wanaagsan uga soo shaqeeyay ciyaaryahan Paulo Dybala, hasayeeshee kooxda SPAL ayaa hal gool iska soo gudday kaddib markii uu gool ku laad u dhaliyay ciyaaryahan Andrea Petagnalater.
Guushaas ayaa ciyaartoyda tababare Maurizio Sarri ee layliya Juventus waxa ay u sahashay inay afar dhibcood oo nadiif ah ku hogaamiyaan Serie A, iyadoo kooxaha foodda ku soo haya ee Lazio iyo Inter Milan ay dheeli doonaan maanta oo Axad ah walow ciyaarta Inter Milan dib loo dhigay.
Ciyaaryahanka u dheela xulka kubadda cagta ee Portugal, Cristiano Ronaldo, oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta birta ku dhuftay kubadda, ayaa 11-kii kulan ee xiriirka ahaa ee ugu dambeeyay horyaalka waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 16 gool.
Halkaas waxa uu 36 kulan oo uu kooxdiisa iyo xulkiisa xilli ciyaareedkan u dhaliyay 36 gool, Ronaldo-se waxa uu haystaa fursad uu ku jabin karo rikoorka gool dhalinta ee Serie A marka ay Axadda soo aaddan ee 1-da bisha Maarso kulmaan kooxda Inter Milan.